theZOMI: [mrsorcerer:37812] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နတ် ၃ပါး ( တရုပ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အမေရိက) ကရာ ကျီး မော.ဖို. မလို၊
[mrsorcerer:37812] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နတ် ၃ပါး ( တရုပ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အမေရိက) ကရာ ကျီး မော.ဖို. မလို၊
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] နတ် ၃ပါး ( တရုပ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ အမေရိက) ကရာ ကျီး မော.ဖို. မလို၊
အနောက်ကမ္ဘာနဲ.ပေါင်းပြီး နယူကလီးယား ကိစ္စမှာ မြောက်ကိုးရီးယားကို ဆန်ရှင်လုပ်လျှင် အရင်က ကန်.လန်.တိုက်နေကြ တရုပ်က လက်မှတ်ထိုးပါလိမ်.မယ်။ ဒီအချက် ကြောင်. တရုပ်အမောက် က ကမ္ဘာကြီး မျက်လုံးထဲမှာ နဲနဲ ပျော.ခွေ သွားနိုင်တာမို. တရုပ်ကမဖြစ်လို.သာ မြောက်ကိုရီးယား အပေါ် အားနာနာနဲ.ဒီလိုဆက်ဆံလိုက်ရတာပါ ဆိုတဲ. image အင်မေ.ခ်ျ လိုနေပါတယ်။
ဒါကြောင်.အနောက်အဖွဲ.သဘောတူ ဆန်ရှင်ဖြစ်လာရင် တရုပ်ပါ လက်မှတ်ထိုးရပါလိမ်.မယ်ဆိုတဲ. political context ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရတော.မယ်။ ဒါကြောင်.သာ ခုဖြစ်နေတဲ. မြောက်ကို ရီးယားဆိုင်ရာ ဒရာမာလေး ဟာ လိုအပ်ချက်အရ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ အားလုံးဟာ ကမ္ဘာ စီးပွားရေးအခြေအနေအရသက်သက်ပါ။
ဒါကြောင်.-စီးပွားရေးသိပ်ဆန်တဲ.တရုပ် ဟာ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ဒဏ်တပ်မဲ. ဆန်ရှင်ကို သူလက်မှတ်ထိုးမဲ.ကိစ္စမှာ မြောက်ကိုရီးယားကို သစ္စာဖေါက်တဲ.အခါ လူကြားကောင်းတဲ. အကြောင်းကို ကြို ရှာထားရပါမယ်။။ ဒါပေမဲ.-မ်ိတ်ဆွေ အချင်းချင်းတွေဆိုတော. အနောက်ကနိုင်ငံတွေလိုတော. ကြိမ်ဒဏ်ကပြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လှို.၀ှက် တရုပ်ညွှန်ကြားချက်နဲ. တရုပ်နဲ.ဟောင်ကောင်က မြောက်ကိုရီးယားပိုင် ငွေတွေ၊ အကောင်.တွေ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေတောင် တစစ ပြန်ထုတ် ၊ နံမည်ပြောင်း အသွင်ပြောင်းနေစေခဲ.တာ လနဲ.ချီနေပါပြီ။
အမေရိက ကလည်း သိတဲ.အတိုင်း ကမ္ဘာ. နိုင်ငံရေး စစ်ရေးတွေမှာ စစ်တခုကို မလိုအပ်ရင်တောင်မှာ လေကြီးမိုးကြီး ဒရာမာ အကွက်လေးတွေနဲ. ယဉ်ပါးပြီးသားပေမို.၊ ထုံးစံအတိုင်းသူ. စစ်ရေးအကြံပေးအရာ ရှိတွေ သဲသဲလှုပ် စိုးရိမ်တဲ.အတိုင်း ပြင်ဆင်မှုတွေ ကို အကြီးအကျယ် လုပ်နေပါပြီလို. သူ. မီဒီယာက ၀က်ဝက်ကွဲပြောပါလိမ်.မယ်။ခုလည်းပြောနေပါတယ်။
တခုပြောလိုက်ပါမယ်။ ဘာစစ်မှ မဖြစ်ပါဘူး။ မပူကြပါနဲ. ၊ တရုပ်က သူ.ပြဿနာနဲ.သူပါ။ တရုပ်က အနောက်ကမ္ဘာနဲ.တည်.
သွက်သွက်ကြီး ဈေးရောင်းကာမှ ဖြစ်လိုက်တဲ.စီးပွား။
နှစ် ၂၀အတွင်း အဆများစွာ ခုန်ပျံ ထိုးတက်ခဲ.တဲ. သူ. စီးပွားရေး ပုံသဏ္ဍန် ပက်တန်ကို အပျက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အနောက်ဖက် က မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် တင်မဲ. ဆန်ရှင် ကိစ္စမှာ
ဟန်ပန်မဆောင် ချက်ခြင်းကြီး ပါလိုက်ရင်လည်း တရုပ် စီးပွားရေးဆန်လွန်းလို. ၊အချိုးတွေပြောင်း အိုင်ဒီယော လဂျီ ကောက်ကွေး နေပြီလို. နံမည် ပျက်မှာ စိုးလို. player image ပလေယာ အင်မေ.ခ်ျ ဒီ.ထက် ပို မပျက်အောင်၊ ၃ ပွင်.ဆိုင်လိုလို၊ဂျပန်အပါအ၀င် လေးပွင်.ဆိုင်လိုလို နတ်သံနှော နတ် ကနေခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိတယ်။ ကမ္ဘာလုံခြုံရေး အာ၈ျန်ဒါနဲ. အပေးအယူ အလျှော. အတင်း နည်း negotiation tactics အရ ခုလို အခြေအနေအရ ၃ ဦးစလုံးလိုအပ်တဲ. ဒရာမာ ပလေးလုပ်နေကြရတာသာဖြစ်တယ် လို. ယူဆရပါတယ်။
ရွှေ.တော.ရွှေ.နေကြတာပဲ။ အမြှောက်တွေ ဒုံးကျည်တွေ။ ဟိုနားဒီနားရွှေ.လိုက်။ ဒါပေမဲ. စိုးရိမ်စရာ လုံးလုံး မရှိတန်ရာဘူး။ မြောက်ကိုရီးယားဟာ နဲနဲလေးခေါင်းမာ ချင်ပေကပ်ချင် တင်းခံနေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ. ပုံပန်းလုပ် ပြဖို. ဒီအချိန်မှာ အထူး လိုအပ်နေတယ်။ ဒါမှ negotiation tactics ထိရောက်မှာမို. ဒီလို ဖြစ်နေတာတွေဟာ တရုပ်ဖက်က လိုအပ်သလို မြောက်ကိုရီးယားအတွက်ပိုလိုအပ်တယ်။ ဒါမှ ဒီလို နည်းနဲ. စင်ပေါ်အားလုံး တက်ညှိချိန်မှာ အားလုံးဟာ ဟော.ရှော. hot shot players ပလေယာတွေ ဖြစ်နိုင်ကြမှာ ကိုး။
အမေရိကမှာ စာရေးသူက သတင်းတွေ နိုင်ငံရေးပွေလီ နိုင်ငံရေးဈေးသည် ရုပ်ရှင်တွေ အကြည်.များ လို. ထင်ပါရဲ.။ စင်ပေါ်က ဒရာမာတွေဆို မလာခင်ထဲက နဲနဲ ကြိုရိပ်နေမိနေချင်တယ်။
မြောက်ကိုးရီးယား ကဒုံးကျီတို.၊ နယူကလီယားတို. သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး မြန်မာမောင်မောင် ဘဘ တို.က ကိုယ်တွေနဲ.ပဲ ဆိုင်သလိုလို ၊ခြောက်စားသတင်းတွေ ၀င်လာရင် ခေါင်းလေးသုံးပြီး၊ စွတ်မယုံကြဖို.ပြောချင်တာတခုပါ ပဲ။
။ မနှစ်ကမှ တိုင်ဝန်ကို အမေရိက က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၅ ဘီလီယံဖိုး ကာကွယ်ရေး ထောက်လှန်းရေး ရေဒါ စနစ်နဲ.တန်ပြန် ဒုံးတွေ ရောင်းလိုက်တာ တရုပ်ဆို တခွန်းတောင် မဟ ၀ံ.ဖူး ။ အမေရိကန်လည်းစစ်မဖြစ်ဘူး။ အမေရိက ကစီးပွားရေးပါပဲ။ ဈေးရောင်းတော. အမြတ်အစွန်းရတယ်။ ဒီတော.ဈေးရောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လည်း။ ဒါပေမဲ.- ဒီအပေါ်မှာ တရုပ်က စစ်လာဖြစ်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူကလည်းဈေးသည်မို. အထာတူရင်သိတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားက ဘုတ်အီးလေးက စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ. မီဒီယာ ကြေငြာချက်အပေါ်မှာ ဘယ်နည်းနဲ.တွက်တွက် မြောက်ကိုရီးယားက (အောက်ဈေးနဲ.)ကစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။ သို.သော်-သူကိုယ်တိုင်က ဒီ တမ်ပို မှာ သူ.နိုင်ငံအတွက် သိက္ခာ ရှိတယ် ထင်လို. ဒီလို ပလေးနေတာဖြစ်တယ်။ စစ်ဖြစ်လာမှာတော.မဟုတ်ဘူး။ လောင်းရဲတယ်။
မြောက်ကို၇ီးယားက ၂၀၁၂ က ကောင်းကင်ပေါ်လွှင်.ပစ်တင်ခဲ.တဲ. ဂြိုလ်ထု လေး ဟာ လေ.လာရေးသက်သက်ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၂ အတွင်း လေထုထဲ ကစုစုပေါင်း စပိုင်ဒုန်းများနဲ. သာမန်အာကသလေ.လာရေးဒုံးကျည်တွေစုစု ပေါင်း ၇၅ မျှခန်.မှာ မြောက်ကိုရီးက က ၂ ခု ပဲ တာဝန်ရှိတယ်။
အမေရိကသဲသဲပိုလျှင် ဒီတခါတရုပ်ကပါထောက်ခံပြီးသားဖြစ်မယ်။ ဘာကြောင်.လဲ။ နိုင်ငံတိုင်းဟာ သူပြည်တွင်း စီးပွားရေး ကိုသာ အဓိကထားတယ်။
တရုပ်တရုပ်၊ သူမြောက်ကိုးရီးယားကို မဖြစ်မနေ သစ္စာ ဖေါက်ရမဲ. အချိန်မှာတောင်၊ပဏာစားဖို. အကွက်ကလေးနဲ.။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုပ်လူပါးဝတာ ကိုယ်.အစိုးရ ကပိုတာဝန်ရှိတယ်။ သူတို.တရုပ် က မြန်မာစစ်အုပ်စု အသုံးမကျ၊ ကိုယ်.လူမျိုးကိုယ်.နိုင်ငံအပေါ် လုံးလုံး လူစိတ်မရှိတာကို သိနေလို. လုပ်လို.ရလို.သာ ဆက်ဗိုကျ အနိုင်ကျင်.နေတာပဲ မဟုတ်ပါလား။ ။ မြန်မာနိုင်ငံက ရှိတဲ.တရုပ် သူ. FDI ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု က ကမ္ဘာမှာ သူ.ရင်း နှီး မြှပ်နှံ့ကုန်သွယ်မှု၏ ၁ % တောင် မရှိဘူး။အမှန်က မြန်မာ နိုင်ငံကို ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာ မြန်မာစစ်အုပ်စု နဲ. ဦးပိုင်။ အပိုစာသားတွေများလှတဲ. မြန်မာမီဒီယာကလည်း အချိန်ပြည်. ဥာဏ်မပါတာတွေနဲ.ပဲ
ခြောက်စားလုပ်နေတာမို.၊ မြန်မာတွေက မြန်မာအရေး က ချော်ချော် ထွက် ခဏခဏ။
မိထ္ထီလာမီး ၄၈ လမ်း မီး ပြီး ရင် မြန်မာ.အရေးစစ်စစ်တွေ ပဲ ဆက်လုပ်ကြရမယ်။အနောက်ကမ္ဘာ က ကြောင်သူတော် မိဒီယာများက ပရိုဝါရှင်တန် ပေါ.(ပ်) သတင်းများကို အတွေးအမြင် သုံးသပ်ချက်မပါပဲ မြန်မာမောင်မောင် ကိုကို တို.စွတ်စွတ် မတင်သင်.။ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး မစဉ်းစားလျှင် ကိုယ်မြန်မာတွေအတွက် မရှိတဲ. တိုက်ပွဲ တွေ မဆိုင်တဲ. issue အစ်ရှုးတွေမှာ တောင်မော. မြောက်မော.။
မြန်မာပြည်က ပြည်တွင်းစစ် က နယ်စပ်တွေသာမက နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ်မြန်မာစစ်သားတွေ၏ ဘက်ပေါင်းစုံ
စီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်မှု ကသာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ရှိနေတဲ.တဖက်သတ် ထိုးနှက်နေတဲ. စစ်အကြီးစားကြီးဖြစ် လို.
မြန်မာတွေက တိုင်းပြည်ချစ်လျှင် ကိုယ်.ဘေးကိုယ်သိလျှင် ဦးပိုင်ကိုသာ စနစ်တကျ ဆန်.ကျင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ အကြီးဆုံးကိုရလျှင်အသေးတွေပါရလိမ်.မယ်။ ဆင်ခြေရာကြီး ထဲ အားလုံးပါသွားလိမ်.မယ်။ ရန်သူအစစ်က စစ်အုပ်စု တောက်လျှောက် အမြတ်ထုတ်လာ ခြင်းနဲ.သူတို.၏လူမှုစီးပွား မတရားမှုတွေကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ.စစ်ခရိုနီလက်ဝါးကြီးအုပ် စနစ်ပဲဖြစ်တယ်။ ။နိုင်ငံမှာ ရှိသမျှ လုပ်ငန်း၊ စီးပွား၊ လယ်ယာ မြေတွေ စစ်တပ်ပိုင်ရုံနဲ. ပြည်သူလုံးလုံး မခံစားရ၊ ပြည်သူအကျိုးမရှိ။ ပြည်သူတွေငတ်နေ၏။ ဘေးသင်.နေ၏။
ပြည်သူတွေ စိုက်ပျိုးလယ်ယာ မြေပိုင်ရမယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးနဲ. ယဲ.ယဲ. စီးပွားပဲရှိတဲ.နိုင်ငံ မှာ သူတို.ထမင်းအိုးခွဲလျှင် နေရာတိုင်းမှာ မီး အကြီးစားကြီးတွေဆက်လောင်မြိုက်မယ်။ မြန်မာစစ်ခရိုနီ တွေ အားကောင်းနေသရွေ. တနိုင်ငံလုံး ဒီထက် ပိုဆင်းရဲတွင်းနက်သထက်နက်လာမယ်။ အားလုံးခိုးစားတိုက်စားရတော. နေရာတိုင်းမှာ စစ်ရှိနေရတယ်။
ဒီစစ်ခရိုနီ အုပ်စု ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ.အချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ စစ်ပြီးပြီ။ ဒီစစ်ကို ပြီးအောင် ၀ိုင်းလုပ်ကြပါစို.လား။
ဓါတ်ပုံ- ဂူဂဲလ် ၊ သူခိုးဒါးမြ အကြီးစားစစ်ခရိုနီ ခင်ရွှေဟာ ပြည်သူ.ရန်သူ တွေထဲက တယောက်၊
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/06/2013 10:41:00 AM